Ku rakib APK Faylal ay ku Android - Habka ugu fudud si loo soo dajiyo APK on Android
> Resource > Android > Habka ugu fudud ee Ku rakib .apk Faylal ay ku Android
Sida dadka isticmaala Android OS, waxa ay dadku sida ugu waa in ay u ogolaanaya inay si xor ah loo soo dajiyo codsiyada dhinac saddexaad. Waxaad kala soo bixi kartaa oo loo soo dajiyo kasta oo codsiyo ka suuqa. Dhanka kale, waxaa kale oo jira dad badan oo ka cabanaya inaysan iyagu ma ay yaqaaniin sida loo codsiga aan suuqa si telefoonada ama kiniiniga Android ay. Haddii aad sidoo kale raadinaya xal, halkan waad joojin kartaa. Hoos waxaa ku qoran habka ugu fudud ee loo soo dajiyo files APK on Android ka mid ah.
Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in an Tababaraha Android si sahlan loo isticmaalo: Wondershare MobileGo . Haddii aad tahay qof user Mac ah, fadlan ka Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) .
Fiiro gaar ah : In hage soo socda, aynu la MobileGo Wondershare shaqeeyaan. Habka loo soo dajiyo .apk files aad Mac dhow waa isku mid.
Ku rakib files APK on Android 1 click
Ka dib markii ay soo degsado Wondershare Manager MobileGo Android, waxaad ku rakibi iyo waxa maamula on your computer. Isla mar ahaantaa, xirmaan telefoonka Android ama kiniin barnaamijka kombiyuutarka la cable USB ama via Wi-Fi . Wi-Fi waa la heli karaa marka la isticmaalayo version Windows ah, waxaad dhahdaa, Wondershare MobileGo.
Markaa waa inaad aadaa "Apps" on menu bidix ee interface barnaamijka. Halkan dhan barnaamijyadooda aad ku rakiban qalabka Android aad ku qoran yihiin. Intaa ka dib, guji "rakib" in ay doortaan files APK in aad ku badbaadi ama lagala soo bixi on your computer. Waxay la rakibi doonaa mid mid inay telefoonka si toos ah.
Taasi waa. Hadda, aad u ogaato sida loo rakibi .apk files u Android. Intaa waxaa dheer, in aad kara dhoofin aad files APK aad Android back to your computer u gurmad ama la wadaago. Dooro codsiga (s) oo guji "Dhoofinta", ka dibna aad hadda badbaadiya aad files APK on your computer.
Haddii aad u baahan tahay, waxa kale oo aad uninstall karaan barnaamijyadooda la rabin ka Android la mid click on the "uninstall". Tani Tababaraha file Android ma wanaagsana kaliya ee maaraynta barnaamijyadooda aad, laakiin sidoo kale kor u taageerto iyo xiriirada, SMS, oo ku jira oo dhan multimedia wareejinta. Waxaa ay mudantahay ee lahaanshaha.
Play video marka aad rabto in ay si cad oo ku saabsan tallaabooyinka ay si deg deg ah.
Sidee baad ka Nokia Bedelka Xiriirada in LG
Top 20 Free iyo mushaarka Android Apps in Download
Tutorial: Undelete Videos ka Phones Android iyo murriyado